Tile Inosvitsa Iyo Itsva Iine Simba Zvakawanda Nzvimbo IPhone nhau
Tile inopa ayo matsva ane simba kwazvo ma locator
Kana iwe uri mumwe wevaya vanosiya chero chinhu chero kupi, Zvirokwazvo pane kanopfuura kamwe chiitiko iwe wakafunga kuti vanofanirwa kugadzira chimwe chinhu chinokuyeuchidza kuti urikukanganwa chimwe chinhukana. Zvakanaka, zvave zviripo kwenguva yakareba, uye Tile ndiyo inotungamira kambani mune ino chikamu, kwete chete nehukuru asi nemushandisi maonero. Ingori nguva yemwaka weKisimusi, ichangobva kuburitsa yavo nyowani Tile Sport uye Tile Style vagadziri, vane simba uye vanopesana.
Aya madiki madhizaini anonamira kune yako smartphone kuburikidza neBluetooth uye anoona kana iwe uchibva kure navo, achikunyevera kuti uri kusiya chimwe chinhu kumashure. Iine huwandu hunosvika pamamita makumi matanhatu, kuramba kwemvura uye zvinhu zvitsva zvine simbaIvo vakanakira kwete chete kungodzivirira kurasikirwa asi kuti uwane chimwe chinhu muchiitiko icho chawakasiya kumashure.
Iyo Tile Pro Series mutsara unofambidzana neiyo nyowani maficha eiyo Tile application, yakagadzirirwa chaizvo kune izvo zvitsva zvigadzirwa. Ikozvino neiyo vhoriyamu yekudzora uye maviri ekuwedzera matoni, iyo Tile app inobvumira vashandisi kuti vagadzirise kurira kwemidziyo yavo. Iyo mitaundi yepedyo yekugadzirisazve inopa yakagadziriswa naka kubatsira "Tilers" tsvaga zvinhu zvako zviri nyore mukati memakumi matanhatu emamita chinhambwe chemhando yezvigadzirwa zvitsva. Kana chinhu chakaputirwa pasi pemagumbeze kana kana mushandisi asingade kukanganisa avo vakamukomberedza, iyo proximity mita inomutarisa kumuyambira kana ari kuswedera kana kuenda kure.
Asi kwete chete iwe une yako smartphone kuti uwane chako chishandiso, asi iyo yese Tile nharaunda ine zvigadzirwa zvayo inogadzira network pasirese zvinoreva kuti kana mumwe munhu ari padyo nekutsvaga kwekushandisa, Tile inokutendera iwe kuti uione icho kunyangwe iwe mamaira kure. Mutengo wakakurudzirwa weaya matsva matsva i37,95 pachikamu chimwe nechimwe uye € 74,95 iyo paketi yemaviri detectors, kunyangwe muzvitoro zvepamhepo senge Amazon Unogona kuwana iwo mapakeji maviri kune € 59,99.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » IPhone zvishongedzo » Tile inopa ayo matsva ane simba kwazvo ma locator
Iyo gadget inotonhorera! Vachave neanoziva here kwatakasiya musoro? Zvingave zvakanaka kune iyo isingazivi ...
Dzidza maitiro ekushandisa iyo nyowani iPhone X nerwendo rweApple rwakatungamirwa